Olee otú o Nleta na ụdị nke mmiri ozuzo | Netwọk Mgbasa Ozi
Igwe ojii nwere ọtụtụ ụmụ obere ụmụ irighiri mmiri na obere kristal akpụrụ mmiri nke na-abịa site na ngbanwe nke steeti site na mmiri vapo na mmiri mmiri ma sie ike na ikuku ikuku. Igwe ikuku na-ebili ma dị jụụ ruo mgbe ọ jupụta ma ghọọ ụmụ irighiri mmiri. Mgbe igwe ojii jupụtara na ụmụ irighiri mmiri na ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-amasị ya, ha ịkpali n'ụdị ice, snow ma ọ bụ akụ mmiri ígwé.
Want chọrọ ịma ihe niile gbasara ọdịda?
1 Kedụ ka mmiri si zoo?
2 Ofdị ọdịda
2.2 Mmiri ozuzo
2.3 Etu mmiri na snowflakes
3 Msdị ọdịda na ụdị igwe ojii
4 Etu esi atụ mmiri ozuzo
Kedụ ka mmiri si zoo?
Mgbe ikuku dị n'elu na-ekpo ọkụ, ọ na-agbago na elu. Ebe troposphere okpomọkụ ya na-adalata na elu, ya bụ, ka anyị na-arị elu, ọ na-ajụ oyi karịa, yabụ mgbe ikuku ikuku na-arị elu, ọ na-abanye n'ikuku oyi ma na-eju afọ. Mgbe juputara ya, ọ na-abanye na obere ụmụ irighiri mmiri ma ọ bụ kristal ice (dabere na ọnọdụ okpomọkụ nke ikuku gbara ya gburugburu) ma gbaa obere irighiri ihe nwere dayameta na-erughị micron abụọ hygroscopic condensation nuclei.
Mgbe mmiri ahụ na-arapara n'ahụ nuclei ndị a na ikuku ikuku dị n'elu anaghị akwụsị ịrị elu, a na-etolite igwe ojii nke mmepe vetikal, ebe ọnụọgụ nke ikuku na-eju afọ ma na-echekwa. mechie na-abawanye n'ịdị elu. Typedị igwe ojii a na-akpụ site nsogbu ikuku a na-akpọ ya Cumulus humilis na, ka ha na-etolite n'ụzọ kwụ ọtọ ma na-eru oke ọkpụrụkpụ (nke ga-ekwe ka ọkụ anyanwụ ọ bụla gafere), a na-akpọ Cumulonimbus.
Ka alụlụ dị na ikuku ikuku nke rutere saturation ka etinye ya n'ime ụmụ irighiri mmiri, a ga-ezute ọnọdụ abụọ: nke mbụ bụ na ikuku ikuku ajụwo oyi zuru ezuIhe nke abuo bu na enwere uzo odide nke hygroscopic na ikuku nke nkpuru mmiri nwere ike iguzo.
Ozugbo ígwé ojii kpuchie, gịnị na-eme ka ha mịa mmiri, akụ mmiri igwe ma ọ bụ snow, ya bụ, ụdị ụfọdụ nke mmiri ozuzo? Obere ụmụ irighiri mmiri ndị mejupụtara igwe ojii na ndị a kwụsịtụrụ n'ime ya n'ihi ịdị adị nke mmelite, ga-ebido ito na-eri ụmụ irighiri mmiri ndị ọzọ ha hụrụ n'oge ọdịda ha. Ike abụọ na-eme ihe dị mkpa na mmiri nke ọ bụla: n'ihi ịdọrọ na ikuku dị elu na-arụ ọrụ na ya, na arọ nke ụmụ irighiri mmiri n'onwe ya.
Mgbe ụmụ irighiri mmiri buru ibu iji merie ike ịdọrọ, ha ga-agbada n'ala. Ogologo oge ụmụ irighiri mmiri na-anọ n'igwe ojii, ha ga-ebuwanye ibu, ka ha na-agbakwunye ụmụ irighiri mmiri ndị ọzọ na oghere ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ha dabere na oge ụmụ irighiri mmiri nọrọ na-arịgo ma na-agbadata n'igwe ojii na oke mmiri mmiri igwe ojii nwere.
A na-enye ụdị ọdịda dị ka ọrụ nke ọdịdị na oke nke mmiri nke mmiri na-akwali mgbe enyere ọnọdụ ziri ezi. Ha nwere ike ịbụ, drizzle, mmiri ozuzo, akụ mmiri igwe, snow, udu mmiri, mmiri ozuzo, wdg
Drizzle bụ obere ugwu nke ụmụ irighiri mmiri ya mmiri dị obere ma daa daa. Dị ka ọ dị, ụmụ irighiri mmiri ndị a anaghị etinye ala mmiri nke ukwuu ma dabere na ihe ndị ọzọ dịka ọsọ ikuku na iru mmiri.
Igwe mmiri buru ibu buru ibu nke na-esikarị n'ụzọ ime ihe ike na obere oge. A na-asa mmiri ahụ n’ebe a na-ebelata ikuku ikuku ma mepụta etiti obere nrụgide a na-akpọ oke ifufe. Igwe mmiri ozuzo metụtara igwe ojii ndị ahụ Cumulonimbus na-adị ngwa ngwa, ya mere ụmụ irighiri mmiri na-ebu nnukwu.
Etu mmiri na snowflakes
Ọdịda mmiri nwekwara ike ịdị n'ụdị siri ike. Maka nke a, na igwe ojii igwe kristal ga-etolite na igwe ojii ugbua ezigbo okpomọkụ dị ala -40 Celsius. Kristal ndị a nwere ike itolite na-efu mmiri mmiri mmiri na oke okpomọkụ na-ekpo ọkụ na ha (ịbụ mmalite nke nguzobe akụ mmiri igwe) ma ọ bụ site na isonye kristal ndị ọzọ iji mepụta snowflakes. Mgbe ha ruru ogo kwesịrị ekwesị na n'ihi ike ndọda, ha nwere ike ịhapụ igwe ojii ahụ na-ebute oke mmiri ozuzo n'elu mmiri, ma ọ bụrụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi kwesịrị ekwesị.
Mgbe ụfọdụ, snowflakes ma ọ bụ akụ mmiri igwe nke si n'igwe ojii ahụ pụta, ọ bụrụ na ha ezute oyi akwa ikuku na-ekpo ọkụ n'oge ọdịda ha, gbazee tupu ha eruo ala, n'ikpeazụ mee ka mmiri zoo na mmiri mmiri.
Msdị ọdịda na ụdị igwe ojii
Ofdị mmiri ozuzo na-adabere n'ụkpụrụ ọnọdụ gburugburu ebe igwe ojii na ụdị igwe ojii na-apụta. N'okwu a, ọdịda kachasị dịkarịsịrị bụ ihu ihu, okwu ihu igwe na ụdị ikuku ma ọ bụ ụdị ebili mmiri.
Ọdịda mmiri dị n'ihu Ọ bụ nke igwe ojii jikọtara ya na ihu ya, ma nke dị ọkụ ma nke oyi. Gafe n'etiti ihu na-ekpo ọkụ na oyi na-etolite igwe ojii nke na-enye ụdị mmiri ozuzo. Igwe oyi na-etolite mgbe oke ikuku oyi na-ebugharị ma na-ewepu ihe dị ọkụ karịa. Na nrịgo ya, ọ na-ajụ oyi ma na-eme ka e nwee igwe ojii. N'ihe banyere ihu ihu na-ekpo ọkụ, ikuku ikuku na-ekpo ọkụ na-efegharị n'elu nke dị jụụ karịa ya.
Mgbe mmalite nke ihu igwe na-ewere ọnọdụ, ọ na-abụkarị igwe ojii nke na-akpụ bụ a Cumulonimbus ma ọ bụ Altocumulus. Igwe ojii ndị a na-enwe mmepe dị elu karị ma, ya mere, na-ebute oke mmiri ozuzo dị elu ma dị elu. Ọzọkwa, oke nke ụmụ irighiri mmiri dị ukwuu karịa nke na-etolite na ihu ọkụ.
Igwe ojii nke na-etolite n'ihu ihu na-ekpo ọkụ nwere ọdịdị dị nkenke karịa ma na-adịkarị Nimboestratus, Stratus, Totọ. Nọmalị, mmiri ozuzo nke na-abịa n'ihu ndị a ha dị nro, ụdị drizzle.
N'ihe banyere mmiri ozuzo site na oké ifufe, nke a na-akpọkwa 'usoro nchịkwa', igwe ojii nwere ọtụtụ usoro mmepe (Cumulonimbus) ya mere, ha ga-emepụta mmiri ozuzo siri ike na obere oge, mgbe ụfọdụ.
Etu esi atụ mmiri ozuzo
Iji tụọ ọnụ ọgụgụ mmiri ma ọ bụ snow nke dara n'otu ebe na oge etiti oge, enwere mmiri ozuzo. Ọ bụ ụdị iko dị omimi nke miri emi na-eziga mmiri anakọtara na akpa gụsịrị akwụkwọ ebe ngụkọta mmiri ozuzo nke dara ada na-agbakọ.
Dabere n’ebe e debere igwe na-egosi mmiri ozuzo, enwere ike ịnwe ihe ndị dị na mpụga na-agbanwe nha ziri ezi nke mmiri ozuzo. Njehie ndị a nwere ike ịbụ ihe ndị a:
Enweghị data: Enwere ike mechaa usoro a site na mmekorita ya na ndi ozo di nso nke nwere onodu onodu onodu onodu ma ha di na mpaghara ihu igwe.
Emehie ihe ndapụta: njehie na-enweghị isi, data akọwapụtara na-egosi njehie mana ọ naghị emeghachi onwe ya (ụfọdụ mmiri kwụsịrị n'oge mmesho, njehie mbipụta, wdg). O siri ike ịchọpụta ọ bụ ezie na njehie dịpụrụ adịpụ agaghị emetụta ọmụmụ ihe izugbe na ụkpụrụ nke ogologo oge.
Nhazi njehie: ha na-emetụta ihe ndekọ data niile n'oge oge ụfọdụ na mgbe ọ bụla n'otu ụzọ (dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ ọdụ ọjọọ, iji nyocha na-ekwesịghị ekwesị, mgbanwe nke ọnọdụ ọdụ, mgbanwe nke onye na-ekiri ya, ọnọdụ ọjọọ nke (ngwa).
Iji zere ịgbawa mmiri ozuzo mgbe ị na-eti ihe mpempe akwụkwọ nke mmiri ozuzo, ejiri ya mechie ya. A na-esekwa ha na-acha ọcha iji belata mmịpụta nke radieshon nke anyanwụ ma zere ka o kwere mee mmiri. Theme oghere nke mmiri ahụ na-adaba n'ime akpa ahụ dị warara ma dị omimi na-ebelata oke mmiri nke na-ekpochapụ, na-eme ka ngụkọta ọdịda mmiri zuru oke dị ka o kwere mee.
N'ebe ugwu, ebe oke mmiri na-adịkarị n'ụdị (snow) ma ọ bụ maka okpomọkụ ka ọ daa n'okpuru mmiri mmiri, ụfọdụ ụdị ngwaahịa (nke na-adịkarị anhydrous calcium chloride) onye oru ya bu ime ka onu ahia nke mmiri a ga-eme ka o sie ike.
A ghaghị iburu n'uche na ọnọdụ nke nlele mmiri ozuzo nwere ike imetụta nha ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị edebe ya n'akụkụ ụlọ ma ọ bụ n'akụkụ osisi.
A na-atụle ụda mmiri ozuzo anakọtara na lita kwa square mita (l / m2) ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, na millimeters (mm.). Ihe a na-anọchite anya ịdị elu, na millimeters,
nke ahụ ga-erute na oyi akwa mmiri na-ekpuchi ihu ala nke otu square mita.
Site na ozi a ị ga - enwe ike ịmụtakwu banyere mmiri ozuzo, ụdị mmiri ozuzo ma ghọta nwoke ihu igwe nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mmiri ozuzo
Edemede dị mma, ọ baara m uru nke ukwuu. Obi dị m ụtọ na ozi ahụ zuru ezu iji nwee ike ihota nke ọma. Banyere.
Kedu ihe bụ oge oyi nke nuklia?
Nnukwu olulu a hụrụ na Antarctica